It's Easy Tattoo Liner Waterproof 010 | CATRICE COSMETICS
ရေစို ချွေးစို ခံပါသည်
Especially during the first attempts at creatingawing on your eye make-up, you are faced with great challenges. It’s rarely successful at the first go. It's easier to makealot of small strokes and then connect them.
ရေစိုခံတဲ့ It's Easy Tattoo Linerကို ပိုမိုတိကျသေသပ်စွာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုင်နာနှင့်ဆိုရင် eye makeupတွေက ချွေးစိုခြင်း၊ရေစိုခြင်း၊ အပူဒဏ်နှင့် မိုးဒဏ်ကိုပါ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် eye makeupခြယ်တဲ့အခါ Wing linerဆွဲဖို့ကြိုးစားတိုင်းအမြဲတမ်းခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်တိုင်းမှာ အောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဖြတ်ချင်းစီ အတိုလေးတွေဆွဲပြီးမှ တစ်ခုချင်းစီကို ဆက်ပေးကြည့်ပါနော်။